Onye nyocha akụkọ akụkọ adịgboroja Nu.nl na-eji akụkọ coronavirus na akụkọ ụgha: Martin Vrijland
Onye nyocha akụkọ adịgboroja Nu.nl na-eji akụkọ coronavirus na akụkọ ụgha
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 24 April 2020	• 13 Comments
"Gịnị mere ndị Dutch na-eche echiche ji ata ụta maka Bill Gates maka corona," bụ aha ya isiokwu nu.nl nke ha jiri nke abụọ nwaa ijide otu na-etolite etolite. Eziokwu ahụ o nyere nke a na-egosi na ịmụrụ anya Netherlands na-amalite ịmalite iyi egwu n'ike.
N’edemede ahụ ha jiri akọ jikọta onye m na ụdị mgbasa ozi ọzọ na-achịkwa, nke m kpughere. Ruo ogologo oge, usoro mgbasa ozi ndị ọzọ elegharala m anya kpamkpam, mana ugbu a ebe nrụọrụ weebụ m na-abawanye oke, ha ugbu a na biputere ihe na ọ bụghị ọtụtụ mgbe e mesịrị Nu.nl na-abịa na isiokwu na-etinye m dị ka onye na-ekesa akụkọ ụgha. Can nwere ike ịhụ nke ọma na ha na-arụ ọrụ n'okpuru okpu.
Mba, anaghị m ata ụta Corona na Gates! Nke ahụ bụ echiche izu nzuzo n'onwe ya Nu.nl! N'ezie, nke ahụ bụ ụgha Nu.nl!
Lee na saịtị a, naanị ọtụtụ ego Bill Gates na-eme n'ọtụtụ mmepe ọgwụ mgbochi dị iche iche na ụlọ ọrụ ndị na-emepụta arụpụtala ọrụ. Ihe ndị a bụ eziokwu siri ike nke mmadụ niile nwere ike ịlele ma anyị enweghị mkpa maka 'Ministry of Nu.nl' maka nke ahụ.
Ha wee rụtụ aka na edemede na Jenụwarị - ihe fọrọ nke nta na mmalite nke nsogbu Corona - nke m na-egosi patent si na Pirbright Institute. N’ihe ederede ahụ m kọwara na ọtụtụ ọgwụ mgbochi coronavirus agbadoro ụkwụ na na Bill Gates bụ onye ọchụnta ego n’azụ ụlọ ọrụ ahụ.
A na - ewukwa Coronaviruses n'ime ụlọ nyocha. Nke ahụ bụ eziokwu. Patent iche iche na na. Ha na-eme nke ahụ iji wuo ọgwụ mgbochi. Nke a apụtaghị na coronavirus covidna nke dị ugbu a bụ 19, ụdị nke ngalaba nyocha ya. Nke ahụ abụghị ikwu Pirbright Institute ma ọ bụ Bill Gates bụ onye kpatara ntiwapụ Covid-19. Ekwughị m nke ahụ, enweghị m ike ikwu ya, n'ihi na enweghị ihe akaebe maka nke ahụ. I nwere ike ịnọ na-eche.
Ihe m n’eme bu iju ajuju di nkpa. I ghaghi. I kwesiri ịna-aju onwe gi ihe.
Ihe omuma atu ajuju a di nkpa bu uzo-19 sirila di. Ọ bụ nje nje nje mebiri emebi, nje na-efe efe gbanaara ya ma ọ bụ nje? Ihe atụ ọzọ nke ajụjụ a bụ etu ọ siri banye n’arụ mmadụ (lee ebe a).
Itlọ ọrụ dịka Nu.nl chọrọ ihi ụdị George Orwell 1984 'Ministry of eziokwu' nke ga-ewepụ echiche ọ bụla ma yie ka ọ na-agba mbọ ịhụ na ndị mmadụ nwere ike ịgbaso naanị eziokwu: eziokwu nke steeti na ndị 'ọkachamara ya'. Nke a pụtara na ịnweghịzi ike ịjụ ajụjụ dị oke mkpa. Inwere ike ige “ndị ọkachamara steeti”. Ọ na-aga n'ụzọ ahụ.
In ke ibuotikọ si January 28 Emere m ka ọ pụta ìhè na Bill Gates kwuru na 2017 na ọrịa na-esote nwere ike ịhazi nke ọma na enyo kọmputa.
Ọ bụrụ na ọ dị n'aka Nu.nl, anyị agaghịzị emekwu njikọ. Nke ahụ bụ "echiche ịgba izu". Naanị ị ga - emechi ọnụ ma ilo ihe ọ bụla usoro mgbasa ozi riri gị. Ma oburu na inwere ochicho ma obu onye na enupu isi (inwere oria EYE). Mba, mba, mba Nu.nl! Ndị mmadụ kwesịrị Ọfọn debe nke ahụ! Ndị mmadụ kwesịrị Ọfọn nọgide na-ajụ ajụjụ ndị dị mkpa. Nke a bụ ikike dị oke mkpa.
Ozugbo anyị nwetere ikike ịjụ ajụjụ dị oke mkpa, anyị bi n'okpuru ọchịchị aka ike.
Nu.nl dị ka ọ chọrọ ka ewebata ụdị ọchịchị a, maka na a na-eleda nkatọ ọ bụla dịka "ọgbụgba izu". Ejikọtara nkatọ m na saịtị mgbasa ozi ọzọ a na-achịkwa (nke n’akpa uwe obodo maka na ha gbafuru mgboagha mee ihe di iche.
Yabụ na ọ dị mma ikwu gbasara Bill Gates. O ghaghi iju gi anya ihe mere onye ghuru ijuru ego ma wepu okwu banyere itugbu banyere mbelata onu ogugu? O ghaghi iju gi anya ihe mere mmadu ji etinye ego na ulo oru ogwu ahu nile; kedu ihe kpatara mmadu ji jiri ikike inweta ihe ịkwụ ụgwọ crypto site na ụbụrụ gị mere? O kweghi ka gi ju gi ma onwere isi n’iru ya?
O kwesịghị inweta crazier ọ bụla! Yabụ ọ bụrụ na m nwere ijeri naịra ijeri na mbụ echi, ụlọ mgbasa ozi niile na ndọrọ ndọrọ ọchịchị nọ m n'ụkwụ ma ajuju ndị na-enweghị isi dị njọ? Ee, nkwupụta a dị ka nke ziri ezi n'ihe gbasara Bill Gates.
Na obodo nweere onwe anyị, anyị ga-aga n’ihu ịjụ ajụjụ. Na mba nweere onwe anyị, anyị kwesịrị ịnọgide na-akatọ ndị ọgaranya ụwa. Na mba efu, ekwesighi ka usoro mgbasa ozi nke dị n'akpa nke ndị bara ọgaranya duzie anyị.
Nu.nl bụ ego zụtara na akpa ego. A na-ewepụ ihe ọ bụla na-emegide ya wee guzoro onye otu ndi otu media jupụta na nzaghachi. A na-ewepụ onye ọ bụla kwuru ihe na-eme ka akụkọ ha gharazie ịdị, dị ka azịza m n'isiokwu ha.
Ihere mee gi Nu.nl!
Ihe omume nje Corona na ememme izu isii tupu ntiwapụ nke Wuhan, gosipụta ọnọdụ yiri ya
Nkwado Microsoft 2020-060606 na-ejikọ ụbụrụ mmadụ na sistemụ ịkwụ ụgwọ crypto
Mkpokọta nepnieuws-checker.nl na-aga ime ka ọnọdụ ala ahụ ghara ịdị na-ele gị anya n'ụwa
Tags: Bill, ego, akwụkwọ ndenye ego, ndị na-agba izu ọjọọ, nkwekọrịta, nkwekọrịta aghụghọ, okpueze, nsogbu corona, coronavirus, Gates, ulo akwukwo, Martin, ozi, nu, nu.nl, patent, Pirbrght, Pirbright, ịgba ọgwụ mgbochi, ọgwụ, van, mba n'efu, Eziokwu
24 April 2020 na 09: 18
24 April 2020 na 09: 46
Netherlands, ala nke nzuzo, ọtụtụ nzuzo
na ebe 'ndị ọrụ dị ọcha' nwere ike zoo nzuzo nke ọma. Ezigbo maka ọchịchị aka ike dị jụụ.
Onye nwe ya dere, sị:
24 April 2020 na 10: 10
Gụọ ihe ndị na-ekwu n'okpuru edemede NU.nl, nke bụ (dị ka ọ dị na NU.nl mgbe niile) na-atọ ụtọ karịa ederede n'onwe ya. Ọ bụrụ na ịgụọ ọtụtụ mmeghachi omume n'okpuru edemede ahụ, ị ​​ga - ahụ nke ọma (akụkụ buru ibu nke) ndị mmadụ ewerela ọrụ na-ekwupụta mmeghachi omume ndị a na ndị were ha n'ọrụ (ma ọ bụ otu ndị mmadụ n'okpuru akaụntụ ọzọ). a na-aza mmeghachi omume ndị a. Ọ na - apụta ìhè ma ọ bụrụ na ị na - eme nke a ogologo oge na isiokwu 'ọnọdụ' dị mkpa site na saịtị ndị a, n'oge na - adịghị anya ị ga - ahụ ụkpụrụ doro anya na - apụta na mmeghachi omume (na - anakwere ma dịtụ oke n'okwu ahụ).
Teta 36 dere, sị:
24 April 2020 na 13: 13
Ee, nke ahụ bụ eziokwu, achọpụtara m na enwere intanet ịntanetị na-arụ ọrụ ebe a. Ana m akpọpụta ha ozugbo! Otu hapụ vidiyo na-eduhie ya site na vidiyo ha ga - emeri na agbanyeghị na a ga - atụgharị atụmatụ niile. Nwa amaala agaghị ekwu ụdị ihe ahụ. Kedu atụmatụ?
Na instagram ha na-atụda onye na-eche echiche ma ọ bụ onye na-akpa izu ọjọọ.
Ọ dị nwute na MSM na o doro anya na ha bụ ndị sooo na-achọ ọrụ na trots. O doro anya na ha ka na-atụ ụjọ na eziokwu ga-agbasa, ma o doro anya na ha nwere oke zoo ezo ma ọ bụrụ na ha agaghị eme ụdị mgba ahụ. Ọ na - ewusi anyị ike ịnọgide na-akpọlite ​​ndị mmadụ!
24 April 2020 na 16: 27
Could nwere ike ikwu na MSM na gọọmentị. Mgbe ụfọdụ ọha na-eme ka ndị isi na-ekwenyeghị na gọọmentị. Nke a bụ maka ndọpụ uche, na-eke ọgba aghara na ịkpata ego. N'ihi na nke ahụ bụ ihe ha hụrụ n'anya. Enwere mmekorita chiri anya na ọrụ ọgụgụ isi site na nlezianya na iduzi akparamagwa nke ndị mmadụ site na nzaghachi, wdg. A na-eme atụmatụ a na-anọpụ iche na mbụ. Ka umuaka zoro, ndi ohu huru Ze. Na mgbakwunye, odibo ohu nwere obere iq, di nkpa nganga iq.
24 April 2020 na 16: 01
25 April 2020 na 00: 36
ijide n'aka na Fritsie enweghi ihe ojoo na nke a, di nkpa
A ga-enwerịrị ọgbakọ nsogbu nsogbu etiti na-ebute site na nchekwa iji dozie nsogbu corona. A ga-enyerịrị '' National Command Center 'a nwere ike iru ike.
ps: Leiden bụ ntọala nke Minerva
25 April 2020 na 19: 00
dị ka a ga - asị na ha ebuteghị ọrụ dị mkpa na arụmọrụ corvid19 a, na oghere cello bụ otu ụdị atụ nke megalomaniac sociopath.
24 April 2020 na 16: 21
ọ bụ nzuzu na anyị ga-ege ntị maka ọnụọgụ na-enweghị nzụlite ọgwụ ma ọ bụ ihe ọmụma. Ọ dị mkpa karịa ịchọpụta onye ọ na-anọchi anya.
Future dere, sị:
24 April 2020 na 21: 32
Nke a bụ ebe ịhịa aka dị nwayọ na-amalite site na ndị na-ese ala, enweghị ndị ọzọ maka ya. Paymentzọ nkwụnye ego dijitalụ / ego.
26 April 2020 na 11: 03
Mwakpo bụ ihe nchebe kachasị mma
2 May 2020 na 13: 39
ma eleghị anya nu.nl kwesịrị ịrụ ọrụ ụlọ akwụkwọ ha, mana mba, nke ahụ abụghị ọrụ ha ma ọlị
Dubute COVID Models
A na - eji usoro abụọ dị egwu na West ebe ọ bụ na ebubo nke mgbasa nke coronavirus na Europe na USA ka "buo amụma" ma meghachi omume mgbasa nke COVID-19. Otu bu ihe emeputara na Imperial College of London. Emepụtara nke abụọ, na-ekwusi ike na nsonaazụ USA, nke Mahadum Washington's Institute for Health Metrics na Nyocha (IHME) na Seattle, dị nso n'ụlọ onye guzobere Microsoft Bill Gates. Ihe dị ole na ole mara bụ na otu abụọ a ji ụgwọ ịdị adị ha site na ntinye ụtụ nke anaghị atụ ụtụ nke kwụsiri ike ijeri ijeri ọgwụ mgbochi na ọgwụ ndị ọzọ iji gwọọ coronavirus - Bill na Melinda Gates Foundation.
Neil Ferguson na ndi otu ya na Mahadum Imperial, na mgbakwunye na WHO na-akwado ya, na-enweta nde kwuru nde site na Bill & Melinda Gates Foundation. Ferguson bụ onye isi Vaccine Mmetụta Moduling Consortium na Imperial College nke edepụtara dị ka ndị na-akwado ya na Bill & Melinda Gates Foundation na Gates na-akwado GAVI-ọgwụ mgbochi. Site na 2006 rue 2018 Gates Foundation etinyela ọmarịcha $ 184,872,226.99 n'ime arụmọrụ ndị nlele nke Imperial College nke Ferguson.
N'ikwu ya, ntọala Gates bidoro wụsa nde mmadụ n'ime arụmọrụ Ferguson nke ọma ka ama ama ama enweghị ajọ ihe kpatara ya, na-eduga ụfọdụ na-atụ aro Ferguson bụ “sayensị ọzọ maka iku”.
22 May 2020 na 17: 52
Ndị a na-enyo na mbụ na-apụta ugbu a na oke, ha na-amalite ịdị oke ọkụ n'okpuru ụkwụ?
" Igwefoto di iche iche nke Luxand nwere ike ihu site na (coronavirus) kpuchie ihu
“Na-elekọta ndị ọrụ kụrụ aka tinyere ego maka corona nzọ gị”, der Führer »
Nleta ha: 2.605.602
Donald Trump na-akpọ ụbọ akwara mgbe Rome na-agba ọkụ, dị ka Emperor Nero
Martin Vrijland op Donald Trump na-akpọ ụbọ akwara mgbe Rome na-agba ọkụ, dị ka Emperor Nero